ဆောင်းဦးရာသီပါ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣
တည်ငြိမ်စီးမျော ♠ ♠ ♠ ♠
ငါချစ်သော ပန်းခင်းကလေးမှာ ...♥¸.•*´`*♥...♥*´`*•.¸♥...
သူ့အတွက် ♥ ♥ ♥
မြတ်နိုးခွင့်ကို ♦ ♦ ♦
ဘယ်သူမှမခိုးအောင် ♥ ♥ ♥
စောင့်ရှောက်ရတဲ့ညများမှာ ♠ ♠ ♠ ♠
တမျှော်တခေါ် အလင်းဝိုးဝါးနဲ့ပါလား ...
သွားလိုက်တော့ ငါ့ညဒီဇင်ဘာရေ ♥¸.•*´`*♥...♥*´`*•.¸♥...
Posted by Xai Yak at 12:53 No comments:
ချစ်သူတို့ ချစ်သက်တမ်းပိုရှည်ကြာအောင် ဖတ်ရှုသင့်သည့် အချက်အလက်များ(25)
မှန် မမှန် တော့မသိဘူး၊ ကိုယ်ဘာသာကိုယ် သေချာဆုံးဖြတ်နိုင်ပါစေ။
ချစ်သူတို့ ချစ်သက်တမ်းပိုရှည်ကြာအောင် ဖတ်ရှုသင့်သည့် အချက်အလက်များ
1. နာမည်ခေါ်ဝေါ် သုံးစွဲတာ မလုပ်ပါနှင့်
2. ချစ်သူရဲ့ ခန္တာကိုယ်အလေးချိန် နဲ့ အခြားအစိတ်အပိုင်း များကို အလှောင်ပါနှင့်
3. အပြုအမူကိုပဲဝေဖန်ပြီး အကျင့်စာရိတ္တကို မဝေဖန်ပါနှင့်
4. စကားပြောနေစဉ် အခြားသူတစ်ဦး နာမည်ကို မကြာခဏမပြောမိပါစေနှင့်
5. စိတ်ကောက်နေစဉ် အခြားသူတစ်ယောက်နှင့် လုံးဝမတွဲပြပါနှင့်
6. ဘာမဟုတ်သည့် ကိစ္စကို မငြင်းပါနှင့်
7. ဖြစ်ပြီးသား ပြသနာများကို ပြန်မပြောဖြစ်အောင် ကြိုးစားပါ
8. ဖြစ်ပျက်သမျှ ကို သူငယ်ချင်းများကို မပြောပါနှင့်
9. သူကြိုက်သည့်အရာများကို မမုန်းပါနှင့်
11. ဒေါသနဲ့ စကားမပြောပါနှင့်
12. စကားများတိုင်း သူပြောတာကို နားထောင်ပေးပြီး စဉ်းစားပါ
13. သူစကားပြောနေစဉ် မကြာခဏ ဖြတ်မပြောပါနှင့်
14. ကိစ္စရပ်တစ်ခုကို ပြီးဆုံးသည်အထိ မဖြေရှင်းပဲမနေပါနှင့်
15. ဘာအကြောင်းနဲ့မှ မအော်ပါနှင့်
16. သူသာ သင့်အတွက် အလိုအပ်ဆုံးဆိုတာ သူသိပါစေ
17. ချစ်သူက ချောလား၊လှလား မေးတိုင်း ပြုံးသာ ပြလိုက်ပါ
18. အကြောင်းတိုက်ဆိုင်တိုင်း သင်ကသာ ငွေရှင်းလိုက်ပါ
19. သူ၏ရှေ့မှောက်တွင် အခြားသူများကို သိသိသာသာလိုက်မကြည့်ပါနှင့်
20. အမှတ်တရ ဖြစ်ရပ်များကို သတိရတိုင်းပြောပါ
21. ဖြစ်နိုင်လျှင် ချစ်သူ၏ မွေးနေ့ နှင့် ရည်းစားစဖြစ်သည့်နေ့ကို မှတ်ထားပါ(ပြန်မေးတတ်လို့ပါ)
22. တကယ်အရေးကြုံမှ ပိုက်ဆံချေးပါ
23. ဖြစ်ပျက်သမျှအားလုံးကို သင်ကဦးအောင်တောင်းပန်လိုက်ပါ
24. အခွင့်အရေးရတိုင်း မယူပါနှင့်
25. လက်ဆောင်အသေးအမွှားလေးများ မကြာခဏပေးပါ။ ။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက် အီးမေးလ် နဲ့ ပို့ လိုက်တာကို ပြန်လည်ဖော်ပြပေးလိုက်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။
Posted by Xai Yak at 19:01 No comments:
ကျနော် မမနဲ့ နီးရအောင် ဆိုပြီး နတ်ကန္နားပေးဖို့ ပိုက်ဆံ စုနေပါတယ်မမ။
အလှည့်ကျရင် မမတို့ လမ်းထိပ်က မီးကင်းမှာ ကျအောင် ဆယ်အိမ်မှုးနဲ့
ရပ်ကွက်လူကြီးကိုလည်း ဖာလူဒါ တစ်ယောက်တစ်ခွက် တိုက်ထားပါတယ်မမ။ မမနဲ့
နီးဖို့ဆိုပြီး ယတြာချေပေးတဲ့ ဗေဒင်ဆရာကိုတော့ ချောင်းရိုက်ဖို့
ဝါးရင်းတုတ် ကောက်ထားပါတယ် မမ။ အနီးစပ်ဆုံး ဆိုလို့ တမြန်နှစ်
မိုးတွင်းတုန်းက မမစီးတဲ့ကား ကျနော့်နားက ဖြတ်သွားတုန်း ပုဆိုးကို
ဗွက်စင်သွားတာပဲ ရှိပါသေးတယ် မမရယ်။
* နွေညတွေမှာဆို အသုဘ ယပ်တောင်လို အေးချမ်းမှု ပေးနိုင်တဲ့ မမအပြုံးလေးကို သတိရမိတယ်။
ငယ်ငယ်ကတည်းက ကျောင်းဝမှာရောင်းတဲ့ ပြောင်းဖူးပြုတ် ဝယ်စားတိုင်း မမရဲ့
သွားလေးတွေကို မြင်ယောင်တယ်။ ကျောင်းကားဆရာ ဦးလေးကြီး ကွမ်းချိုးတက်နေတဲ့
သွားတွေနဲ့ ပြုံးပြတိုင်း မမရဲ့ သွားလေးတွေ ဒီလိုမဟုတ်ပါလား
လို့မြင်ယောင်ပြန်တယ်။ မမဟာ ကျနော့်ရင်ထဲ အမြဲရှိပါတယ်။ ဒီနေ့
ကြက်သားအာလူး ချက်တာတောင် မမအတွက်ဆိုပြီး ကျနော် အာလူးတစ်လုံး
* မမနဲ့ နီးဖို့ ကျနော် အဆင့်မြင့်တဲ့ ဘဝကို တက်လှမ်းနိုင်အောင်၊ သူငယ်ချင်းတွေရဲ့ ရွာကို
လိုက်လည်တိုင်း ထန်းပင်တက် သင်နေပါတယ် မမ။ တကယ်တော့ ဟိုး မိုးပေါ်
လေယဉ်ပျံထဲက ခြေသုတ်ဖုံလို မမရဲ့ ဘဝဟာ မဟာအဝီစိ ငရဲ အောက်ဆုံးမှာ ဒေဝဒတ်
ဖင်ခုထိုင်တဲ့ ခွေးခြေခုံလို ကျနော့် ဘဝက လက်လှမ်း မမီနိုင်အောင်
မြင့်မားလှပါတယ်ဗျာ။ စွဲလန်း တတ်လိုက်ပုံများ မမကို လွမ်းလို့
ကိုရီးယားကား မကြည့်ဖြစ်တာတောင် သုံးရက်ရှိပြီပေါ့။
* မမကို လွမ်းလွန်းလို့ ထမင်းမစားနိုင်တာနဲ့ ဒန်ပေါက်ချည်း ဝယ်စားနေရတာ နှစ်ရက်တောင် ရှိပြီ။
ညဖက်ဆိုလည်း မအိပ်နိုင်လို့ မနက်မိုးလင်းမှပဲ တစ်နေကုန် အိပ်နေရတယ်။
လွမ်းလွန်းလို့ မယ်ဒလင်တီးတော့လည်း ဘေးအိမ်က အလိုက်ကန်းဆိုး မသိတဲ့ လူက၊
သူ့အဖွား နေမကောင်းလို့ မတီးပါနဲ့တဲ့။ ဒီနေ့လည်း လွမ်းလွမ်းရှိတာနဲ့
ခိုတွေကို ဆန်ကျွေးပြီး လေးခွနဲ့ ပစ်နေမိတယ်။ မမနဲ့ တွေ့မှ ကြော်စားဖို့
* မနေ့က မမကို သတိရနေရင်း ရေခဲချောင်း ဝယ်စားတော့ မမအတွက် ရည်စူးပြီး တစ်ချောင်း ပိုဝယ်လိုက်ပြီးမှ
မမ အနားမရှိနိုင်မှန်း သတိရတယ်။ နှစ်ချောင်းကို တစ်လှည့်စီ လျက်ရင်းနဲ့
မမအတွက် တစ်ချောင်းက အရည်ပျော်ပြီး ပြုတ်ကျသွားတယ်။ မြန်မာကားထဲမယ်
ဓါတ်ပုံပြုတ်ကျပြီး မှန်ကွဲသလိုပဲ နိမိတ် မကောင်းလိုက်တာ။ ကျနော့်ရဲ့
အချစ်အတွက် သက်မဲ့ ရေခဲချောင်းလေးတောင် စတေးရရှာတယ်။ နောက် ကြုံမှ
ကျနော့်ကို တစ်ချောင်း ပြန်ဝယ်ကျွေးပါ မမ။
Posted by Xai Yak at 20:16 No comments:
Posted by Xai Yak at 19:36 No comments:
အူမကြီးကင်ဆာကို ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျနိုင်စေမည့် နည်းလမ်းများ
Harvard တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှု အကြံပြုချက်အရ ဆလတ်ရွက် နေ့စဉ်စားသူတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နှုန်း ၇၅ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေတယ်လို့ ဆိုလိုပါတယ်။ လေ့လာမှုအရ အစိမ်းရောင်အရွက်တွေမှာ ပါဝင်တဲ့ Carotenoids နဲ့ စွမ်းအင်ပြည့် အင်ဒီအောက်ဆီးဒင့်တွေက အူနံရံက ဆဲလ်တွေရဲ့လုပ်ဆောင်ချက်ကို ကောင်းမွန်စေပြီး ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ အရာတွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်စွမ်းရှိတာ ကြောင့်ပါ။ ဟင်းနုနယ်၊ ပန်းဂေါ်ဖီစိမ်းနဲ့ ဂေါ်ဖီစိမ်းထုပ်တွေမှာ Carotenoids တွေ ပါဝင်ပါတယ်။
လေ့လာမှုအရ ကော်ဖီတစ်နေ့ သုံးခွက်သောက်တာဟာ
တခြားအစားအစာ စားသုံးမှုပုံစံနဲ့ ဘ၀နေထိုင်မှုပုံစံကို မပြောင်းလဲရင်သာ ရောဂါတွေဖြစ်မှုနှုန်းကို ၃၀ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျော့နည်းစေတယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ ဒါကတော့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Chlorogenic နဲ့ Caffeic acids တွေဟာ ကျန်းမာရေးကို အံ့သြလောက်အောင် အကျိုးရှိစေတာကြောင့်လို့ ဆိုပါတယ်။
ဂျပန်နိုင်ငံ Nagoya တက္ကသိုလ်မှ လေ့လာမှုတွေအရ သစ်ကြားသီးကို တစ်နေ့ ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံ စားပေးတာဟာ အူမကြီးကင်ဆာကို ၄၆ ရာခိုင်နှုန်းလောက် လျှော့ချပေးနိုင်တယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Omega-3 ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တဲ့ သစ်ကြားသီးဟာ ကင်ဆာဖြစ်စေတဲ့ ဆဲလ်တွေကို ချေဖျက်ပေးနိုင်တာကြောင့်ပါ။
လေ့လာမှုအရ ကယ်လ်စီယမ်က ခန္ဓာကိုယ်ထဲက မကောင်းတဲ့အဆီတွေကို ထိန်းချုပ်ပေးနိုင်ပြီး အစာခြေစနစ်ကိုလည်း ကောင်းမွန်စေပါတယ်။ နွားနို့ ရှစ်အောင်စ၊ ဒိန်ချဉ်ခြောက်အောင်စနဲ့ ချိစ် တစ် အောင်စတွေမှာ ကယ်လ်စီယမ် ၃၀၀ မီလီဂရမ်စီ ပါဝင်ကြပါတယ်။ လူတစ်ယောက်အတွက် ကယ်လ်စီယမ် တစ်နေ့ ၆၀၀ ကနေ ၁၀၀၀ မီလီဂရမ်အထိ လိုအပ်ပါတယ်။
ကြက်သွန်နီထဲမှာ သဘာဝနည်းအရ ကင်ဆာကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ Sulfur နဲ့ Quercetion တွေ ကြွယ်ဝစွာ ပါဝင်တာကြောင့် နေ့စဉ်ခွက်တစ်ခွက်ရဲ့ လေးပုံတစ်ပုံစာလောက် စားပေးသင့်ပါတယ်။
အသင့်ပြုလုပ်ထားတဲ့ အစားအစာဖြစ်တဲ့ ဟော့ဒေါ့၊ Sausugesနဲ့ ကြာရှည်ခံအောင် ပြုလုပ်ထားတဲ့ အသားတွေဟာ အူမကြီးကင်ဆာဖြစ်နှုန်းကို မြင့်မားစေတာကြောင့် အနီရောင်အသားနဲ့ ပင်လယ်စာတွေကိုသာ ရွေးချယ်ပေးသင့်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 19:32 No comments:
အမျိုးသမီးလေးယောက်မှာ အနည်းဆုံးတစ်ယောက်ခန့်ဟာ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာကို ပုံမှန်ခံစားရလေ့ ရှိပါတယ်။ လေ့လာမှုတွေအရ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်သူတွေရဲ့ ၉၁ ရာခိုင်နှုန်းဟာ ထိထိရောက်ရောက် သက်သာမှု မရရှိဘူးလို့ သိရပါတယ်။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာမခံစားရအောင် အောက်ပါတို့ကိုပြုလုပ်ကြည့်ပါ။
နံပါတ်တစ် လှုံ့ဆော်သည့်အရာကို ရပ်တန့်လိုက်ပါ
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းအရင်းနံပါတ်တစ်ဟာ စိတ်ဖိစီးမှုပါ။ ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာဖြစ်တတ်တဲ့ အမျိုးသမီးတွေဟာ စိတ်ဖိစီးမှုများလွန်းရင် တစ်ပတ်အတွင်း ခုနစ်ကြိမ်ခန့် attack ရနိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နေ့စဉ် မိနစ်၃၀ခန့် ဖိစီးမှုဖြေလျှော့တဲ့ နည်းလမ်းတွေ အသုံးပြုခဲ့ရင် attack ဖြစ်ချိန် ထက်ဝက်ခန့် လျော့သွားပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုလျော့ကျတဲ့ နည်းလမ်းကို ပုံမှန်အသုံးပြုတာကြောင့် နာကျင်မှုဖြစ်အောင် လှုံ့ဆော်တဲ့ ဖိစီးမှုဟော်မုန်း ထုတ်လုပ်မှု လျော့ကျနိုင်တယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ရေနွေးနဲ့ရေစိမ်ချိုးတာ၊ အသက်ပြင်းပြင်း ရှူသွင်းရှူထုတ်လုပ်တာ၊ စာရေးတာလိုမျိုး ဖိစီးမှုလျော့ကျစေတာတွေကို ပြုလုပ်ပေးပါ။
ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက် ဝေဒနာခံစားရသူတွေအားလုံးရဲ့ ထက်ဝက်နီးပါးလောက်သာ တိကျတဲ့ရောဂါ သတ်မှတ်တာကို ရရှိပြီး ကျန်သူတွေဟာ သူတို့ကိုယ်သူတို့ ဖိစီးမှုကြောင့် ခေါင်းကိုက်တာ(Tension Headache)လို့ ထင်မှတ်ကြတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် ရောဂါအမှန်သိရှိဖို့ အောက်ပါလက္ခဏာတွေ တစ်ခုခု သင့်မှာ ရှိနေရင် ဆရာဝန်ကိုပြောပြပါ။
ဗီတာမင် B2 ၄၀၀ မီလီဂရမ်ကို နေ့စဉ်သောက်ပေးရင် အမျိုးသမီး ၁၀ ယောက်မှာ ခုနစ်ယောက်ခန့်ဟာ attack ဖြစ်ချိန် ထက်ဝက်ခန့် လျော့နည်းသွားတယ်လို့ လေ့လာမှုအရ သိရပါတယ်။ ဗီတာမင် B2 (Riboflavin)ဟာ ဦးနှောက်ဆဲလ်တွေကို adaptable ဖြစ်အောင် ကူညီနိုင်တာမို့ ဟော်မုန်းနဲ့ သွေးတွင်းသကြားဓာတ် မြင့်လိုက်၊ နိမ့်လိုက် ဖြစ်နေရင် ခေါင်းကိုက်အောင် မလှုံ့ဆော်နိုင်ဘူးလို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
အစားအစာနှင့် ရောင်ရမ်းမှု လျော့အောင် ပြုလုပ်ပါ
သစ်သီး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်နဲ့ ကောက်နှံတစ်ခုလုံး ပါဝင်တဲ့ အစာတွေကို များများစားပြီး ဆီကြော်စာတွေကို ဖြတ်ထားရင် ခေါင်းတစ်ခြမ်းကိုက်နိုင်ခြေ ၇၁ရာခိုင်နှုန်း လျော့နည်းတယ်လို့ သုတေသနအရ သိရပါတယ်။ ကောက်နှံတစ်ခုလုံးမှ ရောင်ရမ်းမှု လျှော့ချနိုင်သော သဘာဝပစ္စည်း တစ်ရာကျော် ပါဝင်တာမို့ နာကျင်မှု့ဖြစ်အောင် လှုံဆော်မယ့် ရောင်ရမ်းမှုတွေ လျော့ကျသွားတယ်လို့ သုတေသီတွေက ဆိုပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 19:21 No comments:
နှင်းဆီပန်းလေးတွေနဲ့ ကိုယ့်ချစ်သူကို စကားပြောကြရအောင်
နှင်းဆီ တစ်ခိုင်၊ တစ်ပွင့်ထဲဆိုရင် ကိုယ်ချစ်တာမင်းတစ်ယောက်ထဲပါ ။
နှင်းဆီ နှစ်ပွင့်ဆိုရင်တော့ နှစ်ကိုယ်တူချစ်သမျှပေါ့
ချစ်သက်တမ်း တစ်လတာ အထိမ်းအမှတ် ဆိုရင်တော့ နှင်းဆီ သုံးပွင့် လက်ဆောင်ပေးလိုက်ပါ
တစ်ယောက်ယောက်ကို အကြောင်းပြချက်မရှိ အရူးအမူး စွဲလန်းနေမိပြီ ဆိုရင်တော့
သူ့ကို နှင်းဆီ ခြောက်ပွင့်ပေးပြီး ရင်ဖွင့်လိုက်ပါ
နှင်းဆီကိုးပွင့်ဆိုရင် ဒို့နှစ်ယောက် ရာသက်ပန် ချစ်မြတ်နီုးကြမယ်
နှင်းဆီဆယ်ပွင့်နဲ့ ကိုယ့်မိတ်ဆွေ စုံတွဲတွေကို မင်းတို့အချစ်က အင်မတန်
အပြစ်အနာအဆာကင်းတယ်၊ လိုက်ဖက်ညီတယ် လို့ ပြောကြရအောင်
နှင်းဆီဆယ့်နှစ်ပွင့် (တစ်ဒါဇင်)နဲ့ မင်းဟာ ကိုယ့်အတွက်ပဲ ဖြစ်ရမယ် လို့
နှင်းဆီဆယ့်သုံးပွင့်ကတော့ မင်းဟာ ကိုယ့်ရဲ့ ထာဝရ သူငယ်ချင်းပါ
တစ်ယောက်ယောက်ကို စိတ်မကောင်ပါဘူး။ ခွင့်လွှတ်ပါ လို့ ပြောချင်တဲ့အခါ
နှင်းဆီ အပွင့်နှစ်ဆယ်ကတော့ မင်းအတွက် ငါ့ရင်ထဲက ခံစားချက်တွေက
စစ်မှန်ပါတယ် လို့ အာမခံလိုက်တာပေါ့
မင်းအတွက် အရာရာ အားလုံးကို စွန့်လွှတ်ရဲတယ် ဆိုတာကို သိစေချင်ရင်တော့
နှင်းဆီ နှစ်ဆယ့်တစ်ပွင့်နဲ့သာ အသိပေးလိုက်ပါ
နှင်းဆီ နှစ်ဆယ့်လေးပွင့် (နှစ်ဒါဇင်) ကတော့ ငါဟာမင်းအတွက်ပါ တဲ့
တစ်ယောက်ယောက်အတွက် ဂုဏ်ယူဝမ်းမြောက်ကြောင်း ပြောချင်ရင်တော့ နှင်းဆီ
မင်းကို ချစ်မြတ်နိုးရလွန်းလို့ အရူးတစ်ပိုင်းဖြစ်နေပါပြီ ဆိုရင်တော့
သုံးဆယ့်ခြောက်ပွင့်သော နှင်းဆီ (သုံးဒါဇင်)ကိုသာ သူ့လက်ထဲ အပ်လိုက်ပါဗျာ
နှင်းဆီ အပွင့်လေးဆယ်နဲ့ ကိုယ်မင်းကို အချစ်စစ် အချစ်မှန်နဲ့ ချစ်တာပါ
မင်းအတွက် ကိုယ့်အချစ်တွေက အဆုံးအစမဲ့ပါ လို့ အသိပေးချင်တယ်ဆိုရင်တော့
အဖိုးအတန်ဆုံး၊ အလှဆုံး နှင်းဆီတွေကို အပွင့်ငါးဆယ် အနည်းဆုံးထားပြီး
များနိုင်သမျှ များများသာ စုစည်းပြီး ပေးလိုက်ပေတော့ဗျို့။
နှင်းဆီအပွင့် ၃၆၅..... နေ့တိုင်းလွမ်းတယ်
နှင်းဆီအပွင့် ၉၉၉..... မချုပ်ငြိမ်းတဲ့အချစ်၊ အမြဲတမ်းထာဝရ
နှင်းဆီအပွင့် ၁၀၀၁...... သက်ဆုံးထိတိုင်
(ကော်ပီ စစ်စစ်ဖြစ်ကြောင်းအာမခံပါသည် )
Posted by Xai Yak at 19:07 No comments:
သိပ်မုန်းတာပဲ ....ခါးခါးလျှလျှကိုမုန်းတာ ။ ။
နင့်ကို နှုတ်က မုန်းတယ်လို့ တဖွဖွပြောတဲ့
ငါ့နှလုံးသားပေါ်က မင်းနာမည်ကိုလဲ ဖျက်မရလို့မုန်းလိုက်တာ
လက်ညိုးထိုးအန်မထုတ်နိုင်အောင်ကိုမုန်းလို့ ။ ။
ဟုတ်တယ်.......ငါ နင့်ကို မုန်းတယ် ။ ။
မုန်းတယ်ဆိုတဲ့စကားရဲ့ ခြုံလွာအောက်မှာ အရမ်းချစ်လိုက်ရတာဆိုတဲ့
ခံစားမှုကြီးကပ်ကပ်ပါသွားတာကို .....မုန်းတာ ။
နင်စေစားရာအတိုင်း စည်းချက်လိုက်ခဲ့တဲ့ ငါ့ရင်ခုန်သံကို ........မုန်းတယ်
ဘယ်တော့မှ မချစ်နိုင်မှန်းသိလျှက်နှင့် ငါချစ်ခဲ့တာကို ငါမုန်းတာ
ငါ့ဝိဥာဉ်တွေ ပေါက်ကွဲထွက်မတတ် နင့်ကိုငါ မုန်းတယ်
ငါ့ကိုညာသွားတဲ့ နင့်ကို........မုန်းတယ် ။ ။
ကျေးဇူးပြုပီး.....ငါကိုယ်ငါ မုန်း ခွင့်ပြုပါ ။ ။
ချစ်သူ မင်းကိုမုန်းတယ် အဲ့ ဒီ့အကြောင်းပြချက်တွေ ကြောင့်မုန်းတယ်
ငါ့အချစ်ကိုလိမ်သွားတဲ့ အတွက်လဲ မုန်းတယ် ..ပီးတော့ နင်မှတ်ထား
နင်နဲ့ မတန်ဆုံးအရာက အချစ်စစ်ဘဲ ...
၁။ တချို့ မိန်းမတွေကမျက်နှာချိုချိုလေးလုပ်ထားတတ်တယ် အဲဒါယောက်ကျားတွေကိုဆွဲးဆောင်တဲ့နံပါတ် ၁ "သိတံ"လို့ခေါ်တယ်
၂။ တချို့ကျတော့အသံသံတိုးတိုးလေးနဲ့ရယ်ပြတတ်ကြတယ် အဲဒါကညို့ ချက်နံပါတ် ၂ "ဟာသ"လို့ခေါ်တယ်
၃။ တစ်ချို့မိန်းကလေးလေးတွေကျတော့ ယောင်္ကျားလေးတစ်ယောက်ရှေ့ရောက် ရင် ကြောက်ပြ၊ စိုးထိတ်ပြ တတ်တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက် နံပါတ်သုံး "ဘယ"တဲ့။
၄။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေက ရှက်ကိုးရှက်ကန်းဟန် လုပ်ပြတတ်တယ်။ လျှာတစ်လစ်ထုတ်ပြ တတ်တယ်။ အဲ့ဒါက ညှို့ချက်နံပါတ်လေး "လဇ္ဇ"လို့ခေါ်တယ်။
၅။ တစ်ချို့မိန်းကလေးတွေကျတော့ စကားကို မကြားတစ်ကြားဖြစ်အောင်လုပ်ပြောတ တ်တယ်။ အဲ့ဒါကတော့ ညှို့ချက်နံပါတ်ငါး "မန္ဓ၀ါစာ"လို့ခေါ်တယ်။
၆။ မျက်လုံးထောင့်ကပ်ကြည့်တာ ညှို့ချက် နံပါတ်ခြောက် "အဒေက္ခဏာ"တဲ့။
၇။ မျက်ရည်ကျပြတာက ခုနှစ် "ရုဒါ"တဲ့။
၈။ မခံချင်အောင် စကားနာထိုးတာက ရှစ် "ဤကံကလဟ"လို့ ခေါ်တယ်။
(GTU online မှာတွေ့ တာနဲ့ ကူးပြီးတင်ထားတာ )
Posted by Xai Yak at 18:55 No comments:
အထက်ကပုံမှာဆိုရင် သာမှန်အားဖြင့် Desktop computer တစ်လုံးရဲ့Case နောက်ဖက်မှာမြင်တွေ့ရမည့် connector များဖြစ်ပါတယ်…ဒီ connector တွေဟာ built in connector တွေဖြစ်ပြီး သူတို့ မှာ standard color နဲ့standard size လေးတွေရှိပါတယ်..ဥပမာအားဖြင့် ps/2 keyboard connector သည် အပြာရောင် သတ်မှတ်ထားပြီး pin အားဖြင့် 6pin mini din connector ဖြစ်ပါတယ်..ဒါက desktop ကွန်ပျူတာရဲ့ ဘယ် motherboard မဆို ဒီအတိုင်းသတ်မှတ်ထားတာဖြစ်ပါတယ်..ဒါမှလည်း ကီးဘုတ်ထုတ်တဲ့ company တွေ mouse ထုတ်တဲ့ company တွေအလုပ်ဖြစ်မှာပေါ့..နို့ မိုဆို သူတို့ ထုတ်ချင်တဲ့ design ကိုသာထုတ်မယ်ဆိုရင် motherboard တွေက အမျိူးမျိုးရှိတဲ့အတွက် အရွယ်အစား ကိုက်ညီမှာမဟုတ်ဘူးလေ..ဒါကြောင့်
company တွေက သတ်မှတ်ထားတဲ့ standard color နဲ့size ကိုလိုက်နာပြီး ဒီဇိုင်းထုတ်ကြရပါတယ်..user အနေတွေ ဖက်ကအနေနဲ့ ကြည့်မယ်ဆိုရင်လည်း ဒီလို color လေးတွေကို မှတ်သားခြင်းအားဖြင့် ဘယ် motherboard အမျိုးအစားမဆို color ကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဘယ် connector ကတော့ ဘယ် color ဆိုပြီး အလွယ်တကူ တပ်ဆင်နိုင်ပါတယ်..
Posted by Xai Yak at 13:20 No comments:
4. System and Recovery ထဲမှ အနီရောင် ၀ိုင်းပြထားတဲ့ အောက်မှာရှိတဲ့ Automatically restart ကို အမှန်ခြစ်လေး ဖြုတ်ပေးလိုက်ပါ။
ဒါဆိုရင်တော့ ပုံမှန်တက်လာနေကျ Bluescreen ဆိုတာကြီး မတက်လာတော့ပါဘူး။
Posted by Xai Yak at 13:09 No comments:
Core i series မှာ Nehalem Architecture နဲ့Sandy bridge Architecture ဆိုပြီးရှိပါတယ်.. ပထမဆုံး စထုတ်တာ Nehalem Architecture ကို base လုပ်ပြီး ထုတ်လုပ်ပါတယ်…Sandy bridge Architecture ကိုတော့ 2011 အစောပိုင်းကာလမှာ စပြီးထုတ်ခဲ့ပါတယ်..
အခု ဖော်ပြခဲ့တဲ့အထဲမှာ တစ်ခြားမျိုးကွဲတွေလည်း ရှိကောင်းရှိပါလိမ့်မယ်..core i series processor တစ်လုံးနဲ့တစ်လုံး ဘာကွာလဲလို့မေးလာရင် တစ်ခုတည်းဖြေလို့ မရတော့ပါဘူး ဒါကြောင့်သူ့ မှာပါတဲ့အမျိုးအစား..အထဲမှာ လုပ်ဆောင်နိုင်တဲ့စွမ်းရည် ပါဝင်မှုတွေကို အထက်တွင်ဖော်ပြ ဆွေးနွေးခဲ့ပြီြး ဖစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ..Architecture တစ်ခုတည်းအောက်မှာ ပင်လျင် code name တွေခွဲပြီးတော့ ထုတ်ထားတာ ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရပြီး ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်..
Posted by Xai Yak at 12:37 1 comment:
အီး ဟက်ကင်းရေးတယ်ဆိုပြီး ဟက်ကာလို့တော့ မထင်လိုက်နဲ့ တကယ် မသိတာ ဟက်ကင်းနည်းတွေကို အခုလဲ ရမ်းသမ်းကလိပြီး ရလာတဲ့နည်းလေးကို အသုံးဝင်တဲ့နည်းလေးတစ်ခု ဖြစ်မှာပါဆိုပြီးတင်ပေးလိုက်တာ အာကာဖြိုးက ဘလော့ဂါပါ ဟက်ကာ မဟုတ်ပါဘူး အောက်မှာလုပ်နည်းလေးလေ့လာလိုက်ပါဦး
ကျွန်တော်မှားလုပ်နေမိမှာ စိုးလို့ မူကြို ကလေးတွေကိုပြောပြသလို ပြောပြထားပါတယ် စေတနာပါ တလွဲတော့ မတွေါ်လိုက်ပါနဲ့ အဲလိုပြောနေရအောင် မင်းစာကိုဖတ်နေတဲံ ငါက ကလေး မဟုတ်တော့ဘူးဟ လို့ ပြောနေမှာစိုးလို့ပါ
1. computer power ကို ဖွင့်ပါ
2. Microsoft logo ပေါ်လာပြီဆိုတာနဲ့ Power ခလုတ်ကို ပြန်နှိပ် ပြီး စက်ကို ပိတ်ပေးလိုက်ပါ
3.နောက် စက်ကို ပြန်ဖွင့်ပါ
4. Start Up Repair လုပ်ဖို့ option ကိုမြင်နေရပါပြီ the option ကို ရွေးပြီး enter ခေါက်လိုက်ပါ
5. Startup Repair Run နေပါမယ်
6. screen ပေါ်မှာ အလုပ်လုပ်နေတဲ့ ဟာတွေ မှာ အပြာရောင် ဘားတစ်ခု မြင်ရပါလိမ့်မယ် “searching for problems” လို့ ပြောပါနေပါလိမ့်မယ် ဒီအဆင့်မှာ စာဖတ်ရင်တော့ နဲနဲ ရှုပ်နေပါလိမ့်မယ် လုပ်ကြည့်ရင် သိသိသာသာလွယ်ပါတယ် ဘာမှ လုပ်ရသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုမှ ကလစ် လေးငါးချက်ပဲနှိပ်ရသေးတာ “searching for problems” အဲလိုပြောတာ အမြဲတမ်းတော့ မဟုတ်ဘူးနော် တစ်ခါတလေ something လို့ပြောတတ်တယ်
7. အဲဒီ မက်ဆေ့က မိနစ်အနည်းငယ် အတွင်းမှာ “Attempting repairs” ပြောင်းဖို့ ပြောတာပါ
8. computer running လုပ်နေတာကနေ ထွက်လိုက်ပါ ထွက်ဖို့ အတွက် သင့်ကွန်ပျူတာမှာ 10-40 minutes အထိ အားထားမှီခိုနေရပါတယ်ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့တက်လာပါမယ်
9. 10-40mins ပြီး၇င် “start up repair could not fix the problem” ဆိုတဲ့ မက်ဆေ့ ဘောက်တစ်ခုတက်လာပါမယ် “show problem details” ဆိုတာကို ကလစ်ပါလိုက်ပါ next ကို ကလစ်သွားလဲ ရပါတယ်
10. Scroll ဘားကိုသု့းပြီး .txt file ကို ကလစ်ပေးပါ
11. Notepad ဖိုင်လေးတစ်ခု ရပါမယ်
12. notepad မှာ File->Open ဒါမှ မဟုတ် ကလစ်နှစ်ချက်ပေါ့
13. အခုသင် ဟာ အရင် အက်ဒမင် အကောက်နဲ့ ပတ်ဝကို ဟက်လာခဲ့ပြီးပါပြီ sethc.exe လေးကို မြင်နေပါမယ်
14. C:\_Windows\_system32 ကို သွားပါ sethc.exe နဲ့ rename (သို့) random.exe လို့ ပြတတ်ပါတယ် တစ်ခါတလေမှပါ sethc.exe ဒီလိုပဲ ပြတာများပါတယ်
15. sethc.exe ကို ကော်ပီ ယူပါ ယူလာတဲ့ ကော်ပီဖိုင်ကို cmd.exe လို့ နာမည်ပြောင်းပေးလိုက်ပါ ကော်ပီလုပ်ပြီးတော့လုပ်နော် တစ်ခါတည်းမလုပ်လိုက်နဲ့ ပြသနာတက်သွားမယ်
16.computer ကို Restart ချပေးလိုက်ပါ login screen ၀င်ရောက်ဖို့ “shift” key ကို5ချက် မြန်မြန်လေးခေါက်လိုက်ပါ ဟိဟိ သူ့ဟာသူလဲ ၀င်ပါတယ်ဗျ “shift” key ကို5ချက်ခေါက်တာက မြန်အောင်လို့
17. cmd ကိုခေါ်လိုက်ပါ ဘယ်လိုခေါ်၇မယ် ဆိုတာတော့ပြောတော့ဘူး ဒါတောင်လုပ်နေပြီ ဆိုမှတော့ သိလောက်တယ်လေ “control userpasswords2″လို့ ရေးထည့်လိုက် ဘာမှ မပါစေနဲ့ အဲဒါပဲရေး ရေးပြီးရင် သိမ်းထားနော် ဟိဟိ နောက်တာ နဲနဲ ဦးနှောက်စားခိုင်းလိုက်မယ် ပြောပြဘူး ဘာလုပ်လို့ ဟိ ဟိ
18.anew admin account တစ်ခုကို အခု သင်လုပ်လို့ ရနေပြီ လုပ်ပြီး login ၀င်ပါ
၀င်ပြီးရင် ဘာလုပ်ရမလဲ ဆိုတော့ ထပြီး ကလိုက်ပါ ငါ ၀င်းဒိုးဟက်တာ CD မပါပဲ လုပ်တတ်ပြီလို့ အော်လိုက်ပါဦး အသံလဲ အရမ်းမကျယ်စေနဲ့ ကိုယ့် ဟာကိုယ်အော်တာကိုဘေးခန်းက လူတွေ မခံနိုင်လို့ ဒီကောင် ဟက်နေပါတယ်ဆိုပြီး ရဲတိုင်လိုက်မှ အဖမ်းခံနေရမယ်
ဒီ Post လေးကို ကြိုက်လွန်လို့ ကို အာကာဖြိုးထံမှကိုပြည့်ဖြိုးမှ တဆင့် ပြန်လည်မျှဝေပေးတာဖြစ်ပါတယ်။
Posted by Xai Yak at 12:19 No comments:
Posted by Xai Yak at 20:30 No comments:
Posted by Xai Yak at 20:27 No comments:
Posted by Xai Yak at 20:09 No comments:
ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ ကောက်ရလျှင် ပေါက်တတ်သည့် ထီ(သနားစရာဝေလငါးလေးများ)
ပင်လယ်ကနေထွက်တဲ့ အဖိုးတန်ပစ္စည်းလို့ပြောလိုက်တာနဲ့ လူတိုင်းရဲ့မျက်စိထဲမှာ မုတ်ကောင်ကထွက်တဲ့ ပုလဲဆိုတာကို တန်းခနဲမြင်ကြမှာသေချာပါတယ်။ န၀ရတ်ကိုးပါး ရတနာစာရင်းဝင် ပုလဲလို တန်ဖိုးကြီးပေမယ့် ရတနာမဟုတ်တဲ့အရာ၊ ပုလဲထက်တောင်မှ ရှားပါးတဲ့ပစ္စည်းတစ်မျိုးကိုတော့ မြင်ဖူးတဲ့လူနည်းပါလိမ့်မယ်။မမြင်ဖူးတဲ့အပြင် သိတောင်မသိကြတဲ့လူတွေ တော်တော်များမယ်ထင်ပါတယ်။ဒီပစ္စည်းဟာ သဘာဝပုလဲထက် ပိုပြီးရှားပါးသလို ပိုပြီးတော့ ဒဏ္ဍာရီဆန်ပါတယ်။ ဒီပစ္စည်းဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ နိစ္စဒူဝ သားငါးရှာဖွေရင်း တစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရတဲ့သူတွေအဖို့ ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းပေးတဲ့ အိပ်မက်ထဲက လက်ဆောင်ပါပဲ။ ဒီပစ္စည်းကို ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ လမ်းလျှောက်ရင်း အမှတ်မထင် ကံကောင်းထောက်မစွာ ရှာဖွေတွေ့ရှိသူကတော့ အောင်ဘာလေထီအမြင့်ဆုံးဆုကို ပေါက်သလို ဘ၀ပြောင်းသွားစေနိုင်တဲ့အထိ သူ့ရဲ့တန်ဖိုးက ကြီးမားလှပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီပစ္စည်းကိုတွေ့ဖို့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ တစ်သက်လုံး နေ့စဉ်ရက်ဆက်သွားရှာမယ်ဆိုရင်တောင်မှ ထိုက်တန်တဲ့ကံဇာတာ ပါမလာရင် မတွေ့နိုင်ပါဘူး။ သူဆင်းရဲတံငါသည်တွေကို နေ့ချင်းညချင်း သူကြွယ်ဖြစ်အောင်ဖန်ဆင်းပေးနိုင်တဲ့ ဒီပစ္စည်းက ဘယ်ဟာဖြစ်နိုင်မလဲ။ ဒီပစ္စည်းကတော့ ဖယောင်းသားနဲ့ခပ်ဆင်ဆင်တူပြီး မီးစွဲလောင်နိုင်တဲ့ ဂုဏ်သတ္တိရှိတဲ့ မီးခိုးရောင်မှိုင်းမှိုင်း၊ လက်ဖက်ပုပ်ရောင် ဒါမှမဟုတ် အနက်ပုပ်ရောင်အစိုင်အခဲတစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ် (Ambergris) ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ဝေလငါးကြီးတွေ အစာချေတဲ့နေရာကနေ အန်ထုတ်လိုက်တဲ့အရာဖြစ်လို့ ငါးကြီးအန်ဖတ်လို့လွယ်လွယ်ခေါ်ကြတာပါ။ ကမ္ဘာပေါ်မှာရှိတဲ့ အဓိကဝေလငါးမျိုးကွဲနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့ Baleen Whale ရှစ်မျိုးနဲ့ နဲ့ Toothed Whale ၃၅မျိုးထဲမှာ Toothed Whale အုပ်စုဝင် Sperm ဝေလငါးတစ်မျိုးတည်းကသာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါတယ်။
တကယ်တော့ ပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့ရှိရတဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ အနံ့အသက်ဆိုးဝါးတဲ့ ရေထွက်ပစ္စည်းတစ်မျိုးပါ။ သူရဲ့ဈေးကွက်တန်ဖိုးနဲ့ အသုံးဝင်မှုသာ မရှိဘူးဆိုရင် ဘယ်သူမှကိုင်တွယ်ချင်စိတ်ရှိမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ များသောအားဖြင့် Sperm ဝေလငါးတွေဟာ ဧရာမကင်းမွန်တွေကိုစားသောက်မိပြီး သူတို့ရဲ့အစာအိမ်ဟာ ဒီအရာတွေကိုချေဖျက်နိုင်စွမ်းမရှိလို့ ပြန်အန်ထုတ်ရာကနေ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဖြစ်လာရတာပါတဲ့။ဘာလို့လဲဆိုတော့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ထဲမှာ ကင်းမွန်သားတွေ နစ်မြှုပ်နေတာကို တွေ့ရလို့ပါပဲ။ ဒါပေမယ့် ဒီအရာဟာ အစာဖတ်တွေချည်းသက်သက်မဟုတ်ပါဘူး။ အစာဖတ်တွေအပြင်သွေးကြောလိုမျိုး အကြောတွေယှက်ဆိုင်းနေတာမျိုးလည်း တွေ့ရပါတယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရကတော့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဆိုတာ ဝေလငါးတွေဟာ ကင်းမွန်လိုမျိုးအစာချေရခက်တဲ့ အရာတွေကိုစားသုံးမိပြီး အစာအိမ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်လာတဲ့နာကြင်မှုကို ချေဖျက်ဖို့gastrointestinal tract ကနေ အစာဟောင်းတွေနဲ့အတူ ဓာတ်ပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ချွဲကျိကျိအရာတစ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတဲ့ မာကျောတဲ့အစိုင်အခဲပုံစံမျိုးဆိုရင် ဝေလငါးတွေအလွယ်တကူ အန်ထုတ်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အပြင်ကိုရောက်ပြီး ပင်လယ်ရေနဲ့လေစတာတွေနဲ့ထိတွေ့ပြီးမှ ပုပ်သိုးပြီးအစိုင်အခဲဖြစ်လာတာပါ။ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာ လာတင်နေတာ ဒါမှမဟုတ် ပင်လယ်ထဲမှာ ပေါလောမျှောနေတာမျိုး တွေ့ရလေ့ရှိပြီး အရွယ်အစားကိုလိုက်လို့ သူ့ရဲ့အလေးချိန်ကွာခြားမှုရှိပါတယ်။ သူ့ရဲ့အရွယ်အစားအရ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ အလေးချိန်အနည်းဆုံး ၁၅ဂရမ်(1/2 အောင်စ) ကနေ ၅၀ကီလိုဂရမ်(ပေါင်တစ်ရာ) အထက်ထိရှိတတ်ပါတယ်။ တခါက ပေါင်၂၆၀လောက်ရှိတဲ့ ဧရာမငါးကြီးအန်ဖတ်တစ်တုံးကို ပြင်သစ်ရေမွှေးကုမ္ပဏီတစ်ခုက ရွှေဒင်္ဂါးပေါင် ၆၆၀၀၀ ပေးပြီးဝယ်ယူဖူးပါတယ်။ ဝေလငါးတွေဆီကနေစွန့်ထုတ်လိုက်တဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့ မူလအစပုံစံဟာ နူးညံ့ပြီးတော့ အရောင်ဖြူရော်ရော်ရှိပြီး တခါတလေမှာ အနက်ရောင် အကွက်တွေကွက်ကြားပါရှိတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အနံ့က အဲဒီအချိန်ကတည်း ညှီစို့စို့ပုပ်အက်အက်ဖြစ်နေတာပါ။ လအတန်ကြာရေထဲမှာမျှောပါပြီးတဲ့နောက်မှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ရေတွေလေတွေရဲ့ထိတွေ့မှုကြောင့် မာကျောလာပြီးတော့ ဖယောင်းသားလိုဖြစ်လာပြီး မီးခိုးရောင်(သို့)အနက်ရောင်အဖြစ်ကို ပြောင်းလဲလာခဲ့ပါတယ်။ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့ ညီစို့စို့ပုပ်အက်အက်အနံ့အောက်မှာ ကွယ်ဝှက်ထားတဲ့ တမူထူးတဲ့ဂုဏ်သတ္တိကတော့ isopropanol ဒြပ်ပေါင်းလိုမျိုး တာရှည်ခံပြီး လူတွေကို စူးစူးရှရှအနှောက်အယှက်မပေးတဲ့ အနံ့တစ်မျိုးကြွယ်ဝနေတာပါပဲ။ ဒီလိုမျိုး ဂုဏ်သတ္တိကြောင့် အငွေ့ပျံလွယ်ပြီး ဆီထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့အတွက် ရေမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ တန်ဖိုးကြီးကုန်ကြမ်းတစ်ခု ဖြစ်နေတာပါ
ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့ သိပ်သည်းဆဟာ 0.780 ကနေ 0.926ထိရှိပြီး သိပ္ပံနည်းကျ စမ်းသပ်ကြည့်တဲ့အခါ သူ့ကို အပူချိန် 60°C လောက်မှာအရည်ပျော် အဆီထွက်စေပြီးတော့ အဲဒီထွက်လာတဲ့ ထင်းရှူးဆီလိုအ၀ါရောင်အဆီတွေဟာ100 °C (212 °F)မှာ အဖြူရောင်အငွေ့အဖြစ် အငွေ့ပျံသွားတာကို တွေ့ရပါတယ်။ အဲဒီအရာဟာ ether မှာပျော်ဝင်နိုင်ပြီးတော့ အငွေ့မပျံနိုင်တဲ့ ဆီနဲ့ အငွေ့ပျံနိုင်တဲ့ဆီ နှစ်မျိုးစလုံးမှာလည်း ပျော်ဝင်နိုင်ပါတယ်။ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ အက်ဆစ်နဲ့ အပြန်အလှန်တုန့်ပြန်ဓာတ်ပြုစေနိုင်တာမျိုး လုံးဝမရှိပါဘူး။ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို Alcohol ထဲမှာအပူပေးပြီး အအေးခံလိုက်တဲ့အခါ မူလ Ambergris ကနေ ခွဲထုတ်လို့ရလာတဲ့ အဖြူရောင် Crystal တွေကို ambrein လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဒီရလာတဲ့ရနံ့ကင်းမဲ့တဲ့ ambrein ကိုဖြိုခွဲလိုက်ရင် Ambergris ထဲမှာအဓိကပါဝင်နေတဲ့ ambrox နဲ့ ambrinol တို့ရဲ့ formation ကို ရလာဒ်အဖြစ်ရရှိမှာဖြစ်ပါတယ်။ အဲဒီထဲက ရလာတဲ့ ambroxan ဟာ ရေမွှေးထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုနေတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာရေမွှေး(perfume and fragrance) ထုတ်လုပ်တဲ့နေရာမှာ ကတိုး(musk) လိုမျိုးနာမည်ကြီးပါတယ်။ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရေမွှေးကို လူကြိုက်များလာနေတဲ့အချိန်မှာ အမေရိကန်နိုင်ငံမှာ တရားဝင်ထုတ်လုပ်ရောင်းချခွင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဥပဒေကြောင်းအရအငြင်းပွားစရာရှိနေတဲ့အတွက် အမေရိကန်ကရေမွှေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဟာ ဒီပစ္စည်းကိုသုံးစွဲဖို့လက်ရှောင်လေ့ရှိပါတယ်။ မျိုးတုန်းနိုင်မယ့်အခြေအနေရှိနေတဲ့ တိရိစ္ဆာန်အဖြစ် သတ်မှတ်ထားတဲ့ Sperm Whale တွေဆီကနေ ရရှိတဲ့ပစ္စည်းဖြစ်နေတဲ့အတွက် အမေရိကန်အပါအ၀င် နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ၁၉၇၀ခုနှစ်တုန်းက ငါးကြီးအန်ဖတ်ကုန်ကြမ်းသုံးစွဲခြင်းကို ပြင်းပြင်းထန်ထန် ကန့်သတ်ပိတ်ပင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။ ၂၀၀၅ ခုနှစ်ရောက်မှ ဒီပစ္စည်းကိုတရားဝင်သုံးစွဲခွင့်ရပြီး ဝေလငါးတွေသတ်ဖြတ်ပြီး ရလာတာမျိုးကို ခွင့်မပြုပဲ ကမ်းခြေပေါ်မှာတွေ့ရှိရတဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်တွေကိုသာ ကုန်ကြမ်းအဖြစ်သုံးစွဲခွင့်ပြုခဲ့တာပါ။ ၁၈ရာစုအစောပိုင်းကာလတွေကနေစပြီး ဝေလငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဟာ ကိုလိုနီနယ်ချဲ့စနစ်နဲ့အတူ ကျယ်ပြန့်လာခဲ့ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် Sperm Whale တွေဆီကနေ အဆီတော်တော်များများထုတ်ယူနိုင်တာရယ်၊ သူ့ရဲ့သွားတွေဟာ ဆင်စွယ်လိုပဲ လက်မှုအနုပညာပစ္စည်းတွေ ပြုလုပ်နိုင်တာရယ်နဲ့သူ့ရဲ့အစာအိမ်ထဲကနေ ငါးကြီးအန်ဖတ်တွေ ရရှိနိုင်တာကြောင့် ဝေလငါးဖမ်းသင်္ဘောများဟာ Sperm Whale တွေကို အဓိကဖမ်းဆီးနေခဲ့တာပါ။ ၁၈ရာစုကနေအဆီးအတားမရှိလုပ်ကိုင်နေခဲ့တဲ့ ဝေလငါးဖမ်းလုပ်ငန်းဟာ ၂၀ရာစုလောက်မှာမှ တိရိစ္ဆာန်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအသိအမြင်တွေ ကြွယ်ဝလာတာကြောင့် ဥပဒေအရကန့်သတ်ခံခဲ့ရပါတယ်။ ဒီလိုမှမကန့်သတ်ရင် အဖိုးတန်လှတဲ့ ဝေလငါးအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဆာလောင်မွတ်သိပ်နေတဲ့ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်ရဲ့တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့် ဝေလငါးတွေမျိုးတုန်းနိုင်တဲ့ အခြေအနေတွေဖြစ်သွားဖို့ ဦးတည်နေပြီဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် နိုင်ငံအချို့မှာတော့ ဈေးကွက်လိုအပ်ချက်ကြောင့် ဝေလငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို ခုချိန်ထိတရားဝင်ခွင့်ပြုထားဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ရှေးခေတ်တုန်းကတော့ အီဂျစ်နိုင်ငံမှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို အမွှေးတိုင်အတွက်အနံ့ထည့်တဲ့နေရာမှာ သုံးစွဲပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အီဂျစ်တွေက သူတို့သောက်သုံးတဲ့စီးကရက်တွေမှာ မွှေးရနံ့ထည့်ဖို့ သုံးကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်တရုတ်လူမျိုးတွေက ငါးကြီးအန်ဖတ်ရေမွှေးကို နဂါးတံတွေးရေမွှေးလို့ခေါ်ပြီး စုန်း၊မှော်အတတ်တွေ တစ်ခေတ်စားခဲ့တဲ့ ၁၃ရာစုကာလတုန်းက ဥရောပမှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်အတုံးကို ကိုယ်မှာဆောင်ထားရင် စုန်းပြုစားမှုကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ပုလိပ်ရောဂါကိုနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ သမိုင်းမှတ်တမ်းတွေကို လေ့လာကြည့်တဲ့အခါ ရှေးခေတ်ကာလတုန်းကတော့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ဆေးမြီးတိုနဲ့ အစားအသောက်အချို့မှာ အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်ထည့်သုံးရုံကလွဲပြီး တွင်တွင်ကျယ်ကျယ်မရှိခဲ့ပါဘူး။ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်တွေ့ရှိရတဲ့နေရာတွေကတော့ အတ္တလန္တိတ်သမုဒ္ဓရာကမ်းခြေဒေသတွေနဲ့ Brazil,Madagascar,East Indies,The Maldives, China,Japan,India,Australia,Newzeland နဲ့ Molucca Islands ဒေသတွေပဲဖြစ်ကြပါတယ်။ အထူးသဖြင့် ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို စီးပွားဖြစ်ကောက်ယူစုဆောင်းနိုင်တဲ့နေရာကတော့ Bahamas နိုင်ငံရဲ့အထင်ရှားဆုံး New Providence ကျွန်းပဲဖြစ်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ ဝေလငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကို လုပ်ကိုင်တဲ့လူမရှိသေးဘူးလို့ ထင်ပါတယ်။ မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်မှာ ဝေလငါးဟာ အင်မတန်တွေ့ရခဲတာကြောင့်ရယ်၊ တွေ့ရင်တောင်မှ အရွယ်အစားကြီးမားလွန်းတာရယ်နဲ့ ရောင်းချမယ့်ဈေးကွက်မရှိတာရယ်ကြောင့် ဖမ်းဆီးမယ့်လူမရှိပါဘူး။ နောက်တစ်ချက် လင်းပိုင်နဲ့ဝေလငါးဟာ အသိဥာဏ်ရှိတဲ့နို့တိုက်သတ္တ၀ါဖြစ်လို့ တခါတရံမှာ ပင်လယ်ပြင်မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ ရေလုပ်သားတွေကိုကယ်တင်ပေးတတ်တယ်ဆိုတဲ့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တွေကြောင့် မြန်မာ့တံငါသည်တွေက သူတို့ကိုအန္တရာယ်မပေးကြတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ပင်လယ်ကမ်းစပ်နဲ့ ရေတိမ်ပိုင်းသန္တာကျောက်ဆောင်တွေဆီမှာ လာတင်နေတတ်တဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကိုကောက်ရဖူးသူတွေ ကျွန်တော့်ဇာတိ မာန်အောင်ကျွန်းမှာ အများအပြားတွေ့ဖူးပါတယ်။ တရားဝင်ဈေးကွက်ရှိမရှိအတိအကျမသိပေမယ့် မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာတရုတ်နိုင်ငံကိုတင်ပို့ဖို့အတွက် ပရဆေးကုန်သည်တွေ ဈေးကောင်းပေးဝယ်ကြလို့ ပင်လယ်ကမ်းစပ်မှာတစ်နေ့လုပ်မှတစ်နေ့စားရတဲ့ တံငါသည်တွေ နေ့ချင်းညချင်း ချမ်းသာသွားကြတာ မြင်ဖူးခဲ့ပါတယ်။မှောင်ခိုဈေးနဲ့သာအရောင်းအ၀ယ်ဖြစ်ကြတာများတော့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့ ကမ္ဘာ့သတ်မှတ်ပေါက်ဈေးကို အတိအကျမသိရပါဘူး။ ခန့်မှန်းခြေပြောရရင် ရွှေတစ်ဂရမ်ကို ဒေါ်လာ၃၀ပေါက်ဈေးရှိတဲ့အခါ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ တစ်ဂရမ်ကို ဒေါ်လာ၂၀ကျော်လောက်ပေါက်ဈေးရှိနိုင်ပါတယ်။ သူ့ကိုကုန်ကြမ်းအဖြစ်အသုံးပြုထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ရေမွှေးတန်ဖိုးက အမျိုးအစားနဲ့သက်တမ်းကိုလိုက်ပြီး ဈေးနှုန်းအမျိုးမျိုးရှိပါတယ်။ မကြာသေးတဲ့ကာလတစ်ခုက အလှူငွေရံပုံငွေပွဲတစ်ခုမှာ ရောင်းချဖို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရေမွှေးဟာ တစ်ပုလင်းကို ဒေါ်လာ၄၇၀၀အထိရှိပါတယ်။ ဒီထက်ပိုဈေးကြီးတဲ့ တော်ရုံလူအနားမကပ်နိုင်တဲ့ နှစ်ချို့ရေမွှေးတွေလည်း Elite လူတန်းစားတွေအတွက် သီးသန့်ထုတ်လုပ်တာမျိုးရှိနေပါတယ်။ ၂၀၀၅ခုနှစ်က Marie Antoinette အတွက်ရည်ရွယ်ထုတ်လုပ်ထားတဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရေမွှေးဟာ နှစ်ပေါင်း၂၀၀ သက်တမ်းရှိပြီး ဒီရေမွှေးကို အရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ပြန်လည်ရောင်းချတဲ့အခါ တစ်ပုလင်းကိုဒေါ်လာ ၁၁၀၀၀ တောင်ပေးဝယ်ရပါတယ်။ တခါကနယူးဇီလန် North Island မှာတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ ကီလိုလေးဆယ်ရှိတဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်တစ်တုံးဟာ မှောင်ခိုဈေးကွက်မှာ ဒေါ်လာလေးသိန်းတောင်ပေးဝယ်သွားတယ်လို့ သတင်းကြီးခဲ့ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးဈေးအတက်အကျမငြိမ်တာကလည်း ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့ရှားပါးမှုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ရေမွှေးတွေကို တရားဝင်ရောင်းဝယ်ဖောက်ကားခွင့်ရှိပေမယ့် ရေမွှေးထုတ်လုပ်သူတွေဟာ နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကုန်ကြမ်းတွေကို ခုချိန်ထိလျှို့လျှို့ဝှက်ဝှက် အရောင်းအ၀ယ်လုပ်နေရဆဲပါပဲ။ လက်ရှိဈေးကွက်မှာ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရဲ့အရောင်ကိုကြည့်ပြီး ပေါက်ဈေးအနည်းအများကွာခြားပါတယ်။ ရောင်းချတဲ့နေရာမှာ အနက်ရောင်ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာဈေးအကောင်းဆုံးဖြစ်ပြီး အဖြူရောင်ကတော့ဈေးအနည်းဆုံးပါပဲ။ နောက်ပြီး သူ့ရဲ့အသားကို အလင်းဖောက်နိုင်ခြင်းရှိမရှိရယ်၊ အရက်ပြန်သုတ်ထားသလိုမျိုး မီးရှို့ကြည့်လို့ မီးလိုက်ခြင်းရှိမရှိစတာတွေနဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်စစ်မစစ်ကို စမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်။နောက်ပြီး ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို ပလတ်စတစ်အိတ်နဲ့ထုတ်ထားတာမျိုး၊ ဗူးခွံတစ်ခုထဲမှာထည့်ပြီးအလုံပိတ်သိမ်းဆည်းတာမျိုး မလုပ်ရပါဘူး။ နောက်ပြီးခွေး၊၀က်စတဲ့တိရိစ္ဆာန်တွေနားမှာ ငါးကြီအန်ဖတ်ရဲ့အနံ့ကြောင့် ကိုက်စားတတ်တဲ့အတွက် မထားရပါဘူး။ သူ့ကိုသိမ်းဆည်းမယ်ဆိုရင် အ၀တ်စနဲ့ရစ်ပတ်သိမ်းဆည်းတာ အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဟာ ရေမွှေးဖော်စပ်ရာမှာ အသုံးပြုနိုင်ရုံတင်မက ဟင်းချက်ရာမှာဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အဖြစ်လည်း သုံးစွဲနိုင်သလို ပရဆေးဖော်စပ်ရာမှာလည်း တန်ဖိုးကြီးတဲ့ကုန်ကြမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ကမ္ဘာပေါ်မှာတော့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို ရေမွှေးကုန်ကြမ်းအဖြစ်သာ လူသိများကြပါတယ်။ ရှေးခေတ်တုန်းက ပြင်သစ်မိဖုရားတစ်ပါးနေခဲ့တဲ့ ဗာဆိုင်းနန်းတော်ထဲက အခန်းတစ်ခန်းမှာ ဆွတ်ထားခဲ့တဲ့ ငါးကြီးအန်ဖတ်ရေမွှေးဟာ ယခုအချိန်ထိမွှေးနေဆဲပဲလို့ ပါးစပ်ရာဇ၀င်တစ်ခုကြားဖူးပါတယ်။ ယနေ့ဖက်ရှင်ခေတ်မှာတော့ ငါးကြီအန်ဖတ်ရေမွှေးဟာ ကမ္ဘာ့ Celebrity တွေကြားမှာအပြိုင်အဆိုင်သုံးစွဲကြတဲ့အထိ ရေပန်းစားတဲ့အလှကုန်ပစ္စည်းဖြစ်နေပါပြီ။
ဒီလိုတန်ဖိုးကြီးပစ္စည်းဖြစ်လာဖို့အဓိကဖန်တီးပေးတာကတော့ ပင်လယ်ရေအောက်အနက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ ဧရာမကင်းမွန်ကြီးတွေပါ။ ဝေလငါးတွေသူတို့ကိုစားသောက်ပြီးတဲ့အခါ အစာမချေနိုင်လို့ပြန်အန်ထုတ်ရာကနေ ငါးကြီးအန်ဖတ်ဖြစ်လာရတာပါ။ Sperm Whale တစ်ကောင်ဟာ ပေ၆၀ကျော်ခန့်ရှည်လျားပြီးတော့ တန်၅၀ကျော်လေးပါတယ်။ ဒီဝေလငါးတွေဟာရေအနက်မီတာ၃၀၀ ကနေ ၈၀၀လောက်မှာ အစာရှာစားတတ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ ၂ကီလိုမီတာလောက်ထိငုပ်ပြီး အစာရှာတတ်ပါတယ်။ ရေအောက်မှာ တစ်နာရီကျော်ကျော်ငုပ်နေနိုင်ပြီးတော့ ရေပေါ်ကိုအသက်ရှူဖို့တက်လာတတ်ကြပါတယ်။အမတွေဟာ ငယ်ရွယ်စဉ်မှာ ဒါဇင်လိုက်အုပ်စုဖွဲနေတတ်ပြီး ကြီးလာတဲ့အခါ တစ်ကောင်တည်းခွဲနေတတ်ပါတယ်။ သူတို့စားသောက်တာကတော့ ရိုးရိုးကင်းမွန်၊ရေဘ၀ဲ၊ငါးအချို့နဲ့ ဧရာမကင်းမွန်ကြီးတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ Sperm Whale တွေဟာ တစ်နေ့ကို သူတို့ကိုယ်ခန္ဓာ အလေးချိန်ရဲ့ ၃% ထိစားသုံးတတ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ ဧရာမကင်းမွန်တွေလို အစာမကြေနိုင်တဲ့အရာတွေကို ဗုန်းဗောလဟောစားသောက်မိပြီး နာကြင်လာတာကြောင့် ရေထဲမှာစားပြီးသားအစာဟောင်းတွေကို ပြန်အန်ထုတ်ရာကနေ ငါးကြီးအန်ဖတ်တွေဖြစ်လာရတာပါ။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ပင်လယ်ကမ်းခြေတွေမှာ ဝေလငါးကြီးတွေ သေဆုံးပြီး ကမ်းစပ်မှာလာတင်နေတာမျိုးတွေ ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုမှာ အနည်းဆုံးတစ်ခါလောက် တွေ့နေရပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဒီဝေလငါးအသေကောင်တွေကို ဒေသခံတွေကပုပ်စော်နံလို့မြေမြှုပ်လိုက်ကြတာများပါတယ်။ လတ်လတ်ဆတ်ဆတ်သေတဲ့ဝေလငါးဆိုရင်တော့ ခုတ်ထစ်ပြီး အဆီချက်ကြတာမျိုးတော့ ကြုံဖူးပါတယ်။ ကမ္ဘာ့ပေါ်မှာ ဈေးကောင်းရနေတဲ့ ဝေလငါးဆီကို ကျွန်တော်တို့ဆီကလူတွေ ငါးဖမ်းလှေစပ်တဲ့နေရာမှာ လှေကိုရေလုံအောင် မီးမြှိုက်ဖို့အတွက်သုံးတာမျိုးတွေ့ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ကျန်တဲ့အရိုးကိုတော့ ဖင်ထိုင်ခုံလုပ်ပြီး သွားကိုတော့ အိမ်မှာအလှထားပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ဝေလငါးဝမ်းဗိုက်ထဲက ငါးကြီးအန်ဖတ်ကို ထုတ်ယူရကောင်းမှန်း မသိကြသေးသလို ဝေလငါးအစိတ်အပိုင်းတွေကို ဘယ်လိုအသုံးချမလဲဆိုတာ မြန်မာပြည်ကလူတွေသိပ်မသိကြသေးပါဘူး။ မသိကြတာလည်းတစ်မျိုးကောင်းပါတယ်။ တကယ်လို့ဈေးကွက်မျက်စိပွင့်သွားရင် မြန်မာ့ပင်လယ်ပြင်ကဝေလငါးတွေ အန္တရာယ်ရှိလာမှာအသေအချာပါပဲ။ လောလောဆယ်မှာတော့ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးတိရိစ္ဆာန်ပစ္စည်းမှောင်ခိုဈေးကွက်ဖြစ်တဲ့ တရုတ်နိုင်ငံကတော့ မကြာခင်ဒီကိစ္စကို မျက်စပစ်လာမယ့် အလားအလာတွေရှိနေပါတယ်။ ကမ္ဘာအရပ်ရပ်မှာ အနိစ္စသဘောကိုမေ့ထားကြတဲ့ လူတွေရဲ့မပုပ်သေးတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကို သူ့ထက်ငါ အမွှေးနံ့သာတွေ ထုံမွှမ်းနေစေဖို့အတွက် သမုဒ္ဓရာတွေဆီက နို့တိုက်သတ္တ၀ါ သနားစရာဝေလငါးကြီးတွေခမျာဟာ နှစ်စဉ်အသက်ပေးနေရအုန်းမှာ အသေအချာပါပဲ။
Ref: Myat Thein Tun
Posted by Xai Yak at 09:48 No comments:
အန်အယ်ဒီ ပါတီ နိုင်ငံရေးစည်းဝိုင်းထဲ ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာခြင်းနဲ့ အတူ ကျနော်သဘောမကျသော အချက်တချို့လည်းဒန်တွဲ၍ပါလာသည် ။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ မဲဆွယ်လှုပ်ရှားမှု့ တစ်လျှောက် နှင့် အန်အယ်ဒီ ပါတီရုံးခွဲများတွင် အများဆုံးတွေ့ရသော ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းပုံကြောင့်
လည်း စိတ်ထဲတွင်မသက်မသာဖြစ်မိသည် ။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းသည် မြန်မာနိုင်ငံ၏ လွတ်လပ်ရေးဖခင်ဖြစ်သည် ။ တပ်မတော်ကို စတင်ဖွဲ့စည်း
ခဲ့သော တပ်မတော်၏ ဖခင်လည်းဖြစ်သည် ။ တိုင်ပြည်ထူထောင်ခဲ့သော တိုင်းပြည်၏ ဖခင်လည်း ဖြစ်နေပြန်သေးသည် ။ အခုတလောတွင် အန်လယ်ဒီရုံးများရှေ့ မျက်နှာစာတွင် ဗိုလ်ချုပ် အောင်ဆန်း နှင့် အမေစု ပုံများကို ပူးတွဲ၍ချိတ်ဆွဲထားသည်ကိုလည်း မကြာခဏမြင်တွေ့နေရသည် ။
နိုင်ငံရေးမဆက်နွယ်သော တိုင်းသူပြည်သူတစ်ယောက်လို ခံစား၍ တိုင်းသူပြည်သားတစ်ယောက်လို ပြောဆိုပါမည် ။ ထိုအန်အယ်ဒီရုံးများတွင်
ဗိုလ်ချုပ်ပုံ ကို အပြင်ထုတ်ဗန်းပြ၍ချိတ်ဆွဲထားသည်ကို မနှစ်မသက်ဖြစ်မိသည် ။ အဘယ်ကြောင့်နည်း . . . ဗိုလ်ချုပ်သည် တိုင်းပြည်၏ ပြယုဒ်သာ
ဖြစ်သင့်သည် . . . ဗိုလ်ချုပ်သည် ပါတီတစ်ခု ၊ အစိုးရတစ်ခု ၊ အဖွဲ့အစည်းတစ်ခု၏ ပြယုဒ်မဖြစ်စေလိုပါ ။ ဗိုလ်ချုပ်သည် မိသားစုတစ်ခုပိုင်ဟု
သဘောမထားနိုင် ။ ဗိုလ်ချုပ်သည် တိုင်းပြည်ပိုင်သာ ဖြစ်သည် ဟု ခံယူပါသည် ။ အမေစုသည် ဗိုလ်ချုပ်၏ သမီးဖြစ်သည်ကားမှန်သည် . . .
ထိုအတူ မြန်မာနိုင်ငံသားအားလုံးသည်လည်း ဗိုလ်ချုပ်၏ သားသမီးများ ဖြစ်နေပြန်သေးသည် ။
အန်အယ်ဒီပါတီသည် မဲဆွယ်စည်းရုံးရာတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပုံများ ၊ အန်အယ်ဒီပါတီ၏ အီးစီ နှင့် စီအီးစီတို့ ၏ ပုံများနှင့်သာ မဲဆွယ်စည်း
ရုံးသင့်သည် ဟု ယူဆမိပါသည် ။ အန်အယ်ဒီပါတီတွင် ဗိုလ်ချုပ်သက်ရှိထင်ရှားရှိနေသည်ကားမဟုတ် . . . အန်အယ်ဒီပါတီကြီးကိုယ်တိုင်က ဗိုလ်ချုပ်
ကို ပြပြီးမဲဆွယ်လျှင် တခြားပါတီတွေရော မည်ကဲ့ သို့ ခံစားရမည်နည်း ။ ထိုအပြင် အန်အယ်ဒီပါတီ၏ ကြားဖြတ်ရွေးကောက်ပွဲ ကိုယ်စားလှယ်
လောင်းများ ရွေးချယ်ပုံကို သိပ်မဘောမတွေ့လှပါ ။ ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများသည် ပြည်သူလူထု၏ ကိုးစားခံရသူများဖြစ်သင့်သည် ။ ကိုယ်စားလှယ်
လောင်းများ သည် အန်အယ်ဒီပါတီ၏ ခေါင်းစီး ပါဝါကြောင့် အနိုင်ရသည်မျိုးကား မဖြစ်သင့် . . . မိမိပင်ကိုယ်အစွမ်းအစပြပြီး အနိုင်ရသည်က ပို၍ သင့်တော်ပေလိမ့်မည် ။ အမှန်အတိုင်းဆိုပါရလျှင် အန်အယ်ဒီသည်ကြံ့ဖွံ့ထက်စာလျှင် ပြည်သူလူထူ၏ ကိုးစားမှု့ကို အပြည့်အ၀ရရှိပြီးသော ပါတီကြီး
ဖြစ်သည် ။ ယခင်အစိုးရကို ထိထိမိမိ ဆန့်ကျင်ခဲ့သော တခုထည်းသောအတိုက်အခံပါတီကြီးလည်း ဖြစ်သည် ။ ထိုကဲ့ သို့ ပါတီကြီးကို အချို့သော
ကိစ္စများတွင် ပြည်သူများ စိတ်စနိုးစနှောင့် ဖြစ်မိသည်ကား အမှန်ပင်ဖြစ်သည် ဟု ပြည်သူတစ်ယောက် အနေဖြင့် မှန်ရာကို ဆိုပါ၏ ။
( နိုင်ငံရေးသမားစစ်စစ်များသည် အကြောင်းအရာများကို မိမိလိုရာဘက်သို့ ဆွဲငင်၍ ၊ မီဒီယာသမားများစစ်စစ်များသည် အကြောင်းအရာများကို မိမိမြင်သည့်အတိုင်း သမာသမတ်ကျကျ တင်ပြသည် )
Posted by Xai Yak at 08:55 No comments: